GroupSolver: leverage AI na NLP Na Nyocha Ahịa | Martech Zone
GroupSolver: leverage AI na NLP Na Nyocha Ahịa
Fraịde, Ọktọba 30, 2020 Fraịde, Ọktọba 30, 2020 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’ị mepụtara nyocha ma nwee olile anya iji nweta ọnụọgụ na njirimara dị na azịza gị, ị ghọtara otu o siri sie ike ịza ajụjụ ndị ahụ. Bikpụrụ okwu, nhazi, na ụtọ asụsụ ị jụrụ nwere ike iduga nsonaazụ nke ga - eduga nyocha gị.
Dị ka onye njikwa ngwaahịa, agbakwuru m ọtụtụ ihe na otu ndị na-elekwasị anya. Ọ bụrụ na m na-anwale a ọhụrụ ọrụ interface, na-arịọ maka nzaghachi nwere ike ime ka nnata scour interface na-agbalị na-ahụ ihe na-ezighị ezi… n'agbanyeghị eziokwu na ọ nwere ike ọma e. Ọ bụrụ na m jụọ ma ọ bụrụ na ihe siri ike ma ọ bụ ọ bụrụ na ihe na-efu, onye ọrụ ga-achọ nsogbu ozugbo kama ọ nwere ike ọ gaghị adị.
Kama nke ahụ, anyị gwara onye ọrụ ka o mee ihe wee kọwaa etu ha si eme ihe ahụ. Ọ bụ ezie na nke a wepụrụ echiche ọjọọ ọ bụla, ọ chọrọ ọtụtụ nyocha iji gụpụta nsonaazụ ya n'ime echiche ma ọ bụ nkwenye dị mma. Nsonaazụ ndị ahụ na-abụkarị echiche kacha mma… Abụghị a nkwubi okwu ziri ezi.
Etu esi eme nhazi asusu na igwe igwe
Offọdụ n'ime ihe ndị kasị baa ọgaranya, na-agbanwe agbanwe na-abịa site n'ịjụ ajụjụ ndị a na-emeghe. Gịnị mere bụ ihe atụ zuru oke. Ma azịza ya ya mere bụghị ọnụọgụ, ọnụọgụ abụọ, ma ọ bụ nzaghachi nhọrọ… ya mere ọ na-esiri ike mgbe niile iji nweta ọnụọgụ na njirimara dị mkpa ịchọrọ site na ịjụ ajụjụ ghere oghe iji duzie mkpebi azụmahịa.
Obi dị m ụtọ, nhazi asụsụ (NLP) na ngwa igwe (ML) nwere ike imeri nsogbu ndị a! Site na ijikọta igwe mmụta na ọgụgụ isi igwe mmadụ, Otu Solution bụ usoro nyocha teknụzụ nyocha nke na-eji ọgụgụ isi eme ihe iji jụọ ma mesie ike yana ajụjụ dị mkpa na nyocha ịntanetị.
GroupSolver dabara n'etiti nyiwe ime-ya-n'onwe gị, dịka Survey Monkey na Google Surveys, yana ụlọ ọrụ nyocha ọrụ zuru oke, dịka McKinsey & Company and Accenture.
Ihe na - edozi GroupSolver iche bụ ụzọ ha si edozi azịza asụsụ ndị sitere n'okike, na -
Ìgwè mmadụ ọgụgụ isi - Ndị na-aza ajụjụ na-aza ajụjụ ghere oghe n'okwu nke aka ha, wee mekọrịta.
Igwe ihe igwe - Azịza nke ajụjụ ndị a na-emeghe na-arụ ọrụ site na algorithm dị ike ma na-edozi onwe ya.
Ọnụ ọgụgụ dị elu - ikpo okwu na-akwado azịza asụsụ ndị dị na mbara ma na-atụle nghọta qualitative.
Ngwaọrụ GroupSolver Gụnyere
AI Mepee Azịza ™ - Site na ijikọta mmụta igwe na ọgụgụ isi igwe mmadụ, GroupSolver na-ahazi ma na-agụ azịza mepere emepe na-akpaghị aka. Enweghị ọzụzụ data, ọ dịghị usoro nhazi mmadụ, na enweghị koodu ederede ederede adịghị mkpa.
Ekele lus - IdeaCluster na-egosi mmekorita dị n’etiti azịza mmeghe onye ọ bụla. Nnọọ aka mgbe ewu a ahịa personas ma ọ bụ na-agwa a ika akụkọ. Nke ahụ dị mma - ụdị nke otuSolver tọhapụrụ na ụdị regression na mmekọrịta pụrụ iche na data ọnụọgụ
Ndubueze ™ - IntelliSegment bụ ngwa ọgụgụ nwere ọgụgụ isi nke nwere ike inyere gị aka ịghọta etu azịza nke ajụjụ ndị a na-emecha si dị iche maka ngalaba azịza ya. Odi ka ichota akuko na ahihia.
Idea Cloud ™ - IdeaCloud bụ kọmpụta ma dozie ụzọ dị iche iche nke azịza ndị kachasị kwado nye ajụjụ na-emeghe. Mpempe akwụkwọ buru ibu na-egosi azịza yana nkwado dị elu n'etiti ndị zaghachirinụ. Obere font bụ maka… nke ọma, azịza nke ahụ emeghị ya.
Otutu mmadu kwenyere Ngwọta ™ - Ngwọta Nkwenye bụ usoro azịza ndị akwadoro nke ọma na ibe ha. Ọ na-egosi azịza nke ga-aga nke ọma ma bụrụ nkwekọrịta nkwekọrịta n'etiti ndị zaghachirinụ.
Choice azịza - E wezụga ịbụ achịcha na butter nke nnyocha nyocha, azịza nye ọtụtụ nhọrọ nwere ike inye aka na iwulite ngalaba ndị na-aza ajụjụ maka nghọta bara ọgaranya. Anyị na-eme ka ha dị ọhụrụ ma melite na ezigbo oge.
Mbubata data - Ọ bụrụ nakọtara ozi gbasara ndị zara gị, ịnwere ike bulite ya na dashboard anyị. Jiri ya igbutu data GroupSolver ma ọ bụ wuo ngalaba na-aza ajụjụ ọhụrụ.
Nzaghachi Manager - Lelee otu ndị azịza si aza ajụjụ gị ozugbo. Nchịkọta ma gosipụta ha site na ịpị otu bọtịnụ. Anyị tụkwasịrị obi na igwe anyị, mana data mgbe ụfọdụ chọrọ mmetụ mmadụ dị nro.
Ihe nbudata data - Mbupụ data ntanetị maka nyocha ọzọ na sọftụwia mgbakọ na mwepụ dị ka SPSS, R, ma ọ bụ Excel.
Ihe ngosi ihe ngosi nke GroupSolver na-enyere ndi oru aka ilere ma rụọ ọrụ na nghọta gị. A na-ahazi data ma melite ka a na-achịkọta ya, ị nwere ike ihuchalu nsonaazụ n'oge ọ bụla.
Rịọ a Groupsolver ngosi
Tags: aiAmamịghe echicheotunchọpụta ahịaikpo okwu nyocha ahiamlnhazi asụsụNlp
Nsonaazụ Tech: Martech na-eme ezighi ezi nke ebumnuche ya
4 Ndụmọdụ iji mepụta Usoro Ntaneti vidiyo Na-aga nke Ọma maka Azụmaahịa Gị